Soo degso Xidhmada Boeing 747-8i Hawada Shiinaha FSX & P3D - Rikoooo
downloads 27 541
Boorso Boeing 747-8I Air Shiinaha la hagaajiyay VC. Shiinaha ayaa si rasmi ah u noqday in 2014 dunida ugu horeysay ka hor awoodda dhaqaale ee Mareykanka ah, waxa uu ahaa mid caadi ah, waayo, Rikoooo in ducaystaaye pack a, shireen oo bilaa saxar ah by Chris Evans.
Air Shiinaha waa airline kaliya ee qaranka ee Civil Aviation ee Shiinaha, waa xubin ka mid ah Star Alliance, Isbahaysiga ugu wayn airline adduunka.
Loo soo ururiyey oo kor loo qaaday FSX oo ay weheliso B747 VC (Virton 3d cockpit) oo ka timid Alejandro Rojas Lucenda. Kani waa Mashruuca Furitaanka FSX Moodalka Boeing 747-8i GenX, waxaana ku jira adeegidda xamuul dhulka ah, jaranjarada (FSX - Tag aragtida - Qalabka Qalabka -Posky Utility), furitaanka qaybta sanka iyo waxbadan. Waxaa ka mid ah dhawaqyada CF engine ee ka socda BrandonG, oo leh jet dhabta ah si ay duullimaadyadaadu u dhawaaqaan kuwo fiican. Waxaa kor loo qaaday iyadoo la adeegsanayo Boeing 747 VC ee Alejandro Rojas Lucena / FSND (Fiiri dukumiintiyada xubnaha ee faahfaahinta). VC waxaa ka mid ah FMC, EICAS, MFD oo leh qeybta koontaroolka, GPWS, mashiinka shaqeynta, nalalka qulqulka, dab daminta, wareegga shidaalka, shidista shidaalka, laydhka degida, wareejinta naaska, matoorrada matoorrada, APU-ga matoor, badal batariga, baddelaada, de- baraf-wareegga, nalalka guud ayaa beddela. Waad ku mahadsantahay Mashruuca Furfurnaanta tabarucaada ay muujiyeen bulshada adduunka ee jilitaanka duulimaadka. Waxaan ku soo daray qoraalada waaweyn ee Hawada Shiinaha oo uu qoray Stian Svensen. Sidoo kale waxaa ku jira Boeing 747 VC textures kor u qaadista. Tani waxay siiso cad cad oo ah 747 gudaha muuqaalka rookaha casriga ah.
Qore: SkySpirit2011, Alrot, Isugu soo uruuriyay oo tifaftiran FSX Waxaa qoray Chris Evans & Enrique Cornejo
TDS Boeing 787 Mega Xidhmo FSX & P3D